यी ४ राशि भएका व्यक्तिले कमाउँछन् मनग्य सम्पत्ती !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी ४ राशि भएका व्यक्तिले कमाउँछन् मनग्य सम्पत्ती !!
हुनतः धनसम्पति कमाउन र धनी बन्न धेरै नै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । तर केही राशिहरुका लागि भने भाग्यमा नै धनी बन्ने संभावना हुने गर्दछ। कतिपयले यसलाई किस्मत भन्दछन्। कुल १२ राशिमध्ये ४ राशिका ब्यक्तिलाई उनीहरुको भाग्यले नै धनी बन्न साथ दिन्छ। निम्न ४ राशिका ब्यक्तिले धेरै नै सम्पति कमाउँन सक्ने ज्योतिष विद्याका जानकारहरु बताउँछन।
१। वृष राशिस्वृष राशिका जातकमा सुन्दर र विलाशी सामान किन्ने शौख हुन्छ । औसत ब्राण्डका सामग्री यी राशिका ब्यक्तिलाई मन पर्दैन । तसर्थ यी राशिका ब्यक्ति स्वतः धेरै धन कमाउन लालायीत हुने गर्दछन् । साथै वैभव प्राप्तिका लागि पनि यस राशिका ब्यक्तिलाई भाग्यमानी मानिन्छन् । उनिहरुलाई धनी बनाउन राशि नै सहायक बन्ने गर्दछ ।
२। वृश्चिक राशिस्धनी बन्ने सूचीमा वृश्चिक राशिका जातक पनि पर्दछन्। यस राशिका ब्यक्तिलाई भौतिक वस्तुको आकर्षण हुने गर्दछ। ठूला घर, कार, ब्यापार ब्यवसाय प्रति उनिहरु लिप्त हुन्छन। दृढ निश्चयी भएका कारणले पनि सम्पति कमाउने मामलामा वृश्चिक राशिका ब्यक्ति आफैँ पनि मेहनत गर्दछन् भने भाग्यले पनि साथ दिने गर्दछ।
३। कर्कट राशि
सिंह राशिका जातकलाई भीडका बिचमा आफ्नो पहिचान बनाउने शौख हुन्छ। उनिहरु अन्य राशिका ब्यक्ति भन्दा फरक हुने चाहाना राख्दछन्। साथै उनिहरुलाई सम्पतिको मामलामा राशिले पनि साथ दिने गर्दछ। महंगा कार, गरगहना, रुपैयाँ पैसाको चाहाना उनिहरुको सामान्यतयाः पूरा हुन्छ। उल्लेखित सूचीमा तपाईको राशि समावेश छैन भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। किनकी सम्पति वा नाम कमाउन आफ्नो मन, मष्तिष्क र मेहनतले नै पूरा गर्ने। (gnewsnepal बाट सभार)
बैशाख १६ गतेदेखि कैलालीमा निषेधाज्ञा !!
खरबुजा ठिक्क खाए औषधि, धेरै खाए विष पुरा पढ्नुहोस् !!